प्रदेश २ मा चिसोबाट चारको मृत्यु « तपाईंको साझा इजलास
काजीहरुको साथ छोडेर प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न प्रसाईको आग्रह,
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेश भिलेज समुदायलाई हस्तान्तरण,
विएण्डसी अब चाँडै शिक्षण अस्पताल बन्नेछ : प्रधानमन्त्री ओली,
जनकपुर – केही दिनयता बढेको अत्यधिक चिसोका कारण प्रदेश नं २ मा एक बालकसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ । केही दिनयता मौसममा एकाएक परिवर्तन आएपछि कठ््याङ्ग्रिदो जाडो, सिरेटो चिसो हावा तथा शीतलहरका कारण प्रदेश नं २ मा पुसयता चार जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।
प्रदेश नं २ का आठवटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न बस्ती शीतलहरले बढी प्रभावित भएकाले चिसोबाट बच्न यहाँका १२७ ठाउँमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी अति विपन्न तथा गरिब परिवारलाई जाडो तथा शीतलहरबाट सुरक्षित राख्न विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कम्बल वितरण गरिएको छ ।
हालको दक्षिणी पूर्वी अरव सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र तथा पूर्वीविहारमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव परिरहेकाले मौसममा खराबी आएको हो । जसले गर्दा अधिकतम तापक्रम घट्न गई चिसो बढन गएको मौसम विज्ञको भनाइ छ । चिसो बढेकै कारण प्रदेश नं २ का अधिकांश जिल्लामा विद्यालय बन्द गरिएको छ ।
चिसोबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका, दमरोगबाट प्रभावित भएका वृद्धवृद्धा तथा दैनिक ज्यालादारी गरी घर खर्चको जोहो गर्ने मानिस प्रभावित भएका छन् । चिसोबाट प्रभावित भएका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
काजीहरुको साथ छोडेर प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न प्रसाईको आग्रह
विनोद सापकोटा झापा । झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेश भिलेज समुदायलाई हस्तान्तरण
विर्तामोड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विर्तामोड नगरपालिकाले निर्माण गरेको प्रदेश भिलेज समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका
विएण्डसी अब चाँडै शिक्षण अस्पताल बन्नेछ : प्रधानमन्त्री ओली
विर्तामोड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली
महिला फुटबलमा कनकाईको सानदार बिजय
सिएम शर्मा सुरुङ्गा । कनकाई मा.बि. को खेल मैदानमा छैटौं जिल्ला स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता
प्रधानमन्त्री ओली गृह जिल्ला आउँदै : के–के छन् कार्यक्रम ?
प्रदेश गौरव भिलेज समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने
विर्तामोड वाणिज्य संघमा कसले कति मत पाए ?
जसले वाणिज्य संघको निर्वाचनमा मत नदिई फर्किए …
महासचिवमा मैनाली निर्वाचित
विर्तामोडमा बसमुनी छिर्यो स्कुटी
अध्यक्षमा प्रकाश शिवाकोटी निश्चित, घोषणा नभई जुलुस गरेपछि गाडिबाट उतारियो